သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ - Uptodate MM
By Uptodate MMPosted on April 12, 2019
မိန်းကလေးများ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့….
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ ကျောင်းသင်ခန်းစာဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အချိန်အကုန်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူကျက်မှတ်ရပါတယ်.
ဘ၀နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ နေ မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်က အဲ့ ဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့..ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ အလကားရတဲ့ အမြတ်ပေါ့နော်…
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအလကားရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်..မနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ…ကောင်မလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ…
နယ်ကနေလာပြီးဘန်ကောက် မြို့ ပေါ်မှာကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ့ Online ပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..နောက်တော့ချစ်သူအမေရိကန်ိန်င်ငံသားက ဘန်ကောက်ကိုအလည်ရောက်လာပါတယ်….
အတူသွားအတူအတူတူနေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗီဇာသက်တန်းကုန်တော့အမေရိကားကိုပြန်ရတော့မှာမို့ ကောင်မလေးက မပြန်ခင်သူမကို တရားရုံးမှာ ဇနီးမယားအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးသွားပါလို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်လေးက သူလက်မှတ် မထိုးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ ….
သူ့ မှာဇနီးရှိပါတယ် လို့ ပြောတော့ကောင်မလေးက နင်ငါ့ကိုတရားရုံးမှာ လက်မှတ်မထိုးပေးဘူးဆိုရင် အခုချက်ချင်းရဲ ကိုကြောင်းကြားပြီး ငါ့ကိုမတရားစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး တိုင်မယ်ပြောတော့ အဲ့ ဒီနိ်ုင်ငံခြားသားလဲ ကြောက်လို့ နှူတ်ပိတ်တဲ့ အနေနဲ့ သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..
သူ့ စိတ်ထဲမှာဘယ်သူမှ မသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပြီး အလောင်းကို တစ်စစီ ခြေ လက် တွေ အကုန် အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ဖြတ်ပြီး အမှိူက်ထဲ့ တဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ်အမဲထဲထည့်ပြီးမြစ်ထဲသွားမျှောပါတယ် ရေကကျနေတာမို့ အလောင်းက
မမြောဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းကျန်နေနေတာပေါ့ နောက်နေ့ အမှိုက်တွေ လိုက်ကောက်တဲ့ သူကအလောင်းကိုတွေ့ တော့ ရဲကိုအကြောင်းကြားပြီးရဲကအမှူစ်တော့ကောင်မလေးနေခဲ့တဲ့ တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုမေးတာ ကောင်မလေးဆီကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်အမြဲလာကြောင်း ….
သက်သေအနေနဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ လူသွားတဲ့ စင်္ကြန်တိုင်းမှာဗွီဒီယိုကင်မရာတပ်ထားတော့လူသတ်ရားခံကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပဲ ပြန်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားဟာ အဲ့လိုမျိုးဆိုဒ်တွေမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ ချစ်ရေးဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ကြာကူလီလူလိမ်တစ်ယောက်ပါ..
နောက်ထပ်သတင်း.တစ်ခုက အလယ်တန်းကျောင်းသူလေးပါ…..ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လေ့လာရေးခရီး၃ ရက်လောက်သွားချင်တယ်ဆိုပြီးမိဘတွေဆီမှာခွင့်တောင်းပါတယ် ….
မိဘတွေကလည်းကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားမယ်ထင်ပြီး ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲ ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်..နောက်၃ ရက်လောက်ကြာတော့ သမီးဖြစ်တဲ့ သူအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးလို့ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေဆီလိုက်မေးတာ
သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးတစ်ယောက်မှ လေ့လာရေးခရီးမသွားရပါဘူးတဲ့…ဒါဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ သွားတယ်ဆိုတာသိကြလားဘို့ မေးတော့ တိတိကျကျတော့မသိပါဘူး ….
Online ပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့Online ပေါ်ကသူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်မြို့ ဘယ်ရွာကလဲဆိုတာ မိဘတွေရော ငယ်သူငယ်ချင်းတွေရော တစ်ယောက်မှ မသိကြပါဘူး ။အဲဒါနဲ့ မိဘတွေကTV ကနေတဆင့် ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွ လူပျောက်ကြော်ငြာ တင်ပါတယ်..
သူတို့ ရဲ့ သမီးလေး Online ပေါ်က ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ လေ့လာရေးခရီး၃ ရက်သွားတာ ယခုအချိန်ထိ အိမ်ပြန်မရောက်သေးကြောင်း..တွေ့ ရှိက အကြောင်းကြားပါရန် ဆိုပြီး TV ကနေလွှင့်ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်ထိ ကောင်မလေး အိမ်ပြန်မရောက်ခဲ့ပါဘူး သေလားရှင်လားတောင်မသိခဲ့ရပါဘူး.
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ..ဒီအဖြစ်အပျက်လေး၂ ခု ကိုကြည့်ပြီးတို့ တွေ သုံးသပ်ရအောင်နော်..Online ပေါ်မှာက လူပေါင်းစုံ မို့လူ ကောင်းလားလူလိမ်လားဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး ။
လူကောင်းတွေရှိသလို ရုပ်လေးဗန်းပြပြီး မဟုတ်တာ လုပ်နေတဲ့လူလိမ်တွေလဲ ရှိပါတယ်…တစ်ချို့ က ချမ်းချမ်းကို ဝေဖန်အပြစ်တင်ကြပါတယ်.အွန်လိုင်းပေါ်က လူတွေကို မယုံကြည်တာဟာ သဘောထား သေးသိမ်တာပဲတဲ့..
သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်..မိန်းကလေးနဲ့ ယောင်္ကျားလေးယှဉ်လို့ မရဘူး..မိန်းကလေးဆိုတာ အစစအရာရာ သတိထားပြီးဆင်ခြင်ပါမှာ တော်ရာကျပါလိမ့်မယ်..
တစ်ကယ်လို့ ချမ်းချမ်းကို အွန်လိုင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေအယုံအကြည်မ၇ှိဘူး လို့ ပြောလာရင် လဲ စိတ်မဆိုးဘူး.
အင်း ငါ့အကြောင်း သူမသိသေးလို့ငါ့ကိုအယုံအကြည်မရှိတာပဲ..သူမမှားပါဘူး.တစ်နေ့ ငါ့အကြောင်းသိရင်တော့ ငါ့ကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဒီလိုပဲ ခံယူထားတယ်…
အကြောင်းမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ် လေးယုံကြည့်လိုက်တာထက်သေချာလေ့လာပြီးမှ ယုံကြည်သင့်ပါတယ်..ချမ်းချမ်း စာအုပ်တစ်အုပ်မှာဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်…။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာမိမိရဲ့ တန်ဖိုးဘ၀သိက္ခာနဲ့ ပက်သက်လာရင်အားမနာတတ်တာအကောင်းဆုံးပါ တဲ့ .အရာရာကို အသိလေးနဲ့ စဉ်းစာဆင်ခြင်ပြီးချင့်ယုံပါလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်…..
Credit; Chan Chan
သူငယျခငျြးတှအေားလုံးသငျခနျးစာယူသငျ့တယျထငျလို့ မြှဝပေေးတာပါ ကြောငျးသငျခနျးစာဆိုတာ ကိုယျတိုငျက အခြိနျအကုနျခံပွီး လလေ့ာသငျယူကကျြမှတျရပါတယျ.
ဘဝနဲ့ ပကျသကျတဲ့ သငျခနျးစာကိုတော့ မိမိပတျဝနျးကငျြမှာ တှေ့ နေ မွငျနရေတဲ့ အဖွဈအပကျြကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျတိုငျက အဲ့ ဒီလိုအမှားမြိုးမဖွဈအောငျ သတိနဲ့ ဆငျခွငျနိုငျရငျတော့..ကိုယျ့ဘဝအတှကျ အရငျးအနှီး စိုကျထုတျစရာမလိုပဲနဲ့ အလကားရတဲ့ အမွတျပေါ့နျော…
ဒီခတျေကွီးထဲမှာအလကားရတယျဆိုတာ ခပျရှားရှားရယျ..မနှဈက ထိုငျးနိုငျငံမှာနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျမှနျလေးပါ…ကောငျမလေးကတက်ကသိုလျကြောငျးသူတဈဦးပါ…
နယျကနလောပွီးဘနျကောကျ မွို့ ပျေါမှာကြောငျးလာတကျရငျးနဲ့ Online ပျေါမှာ အမရေိကနျနိုငျငံသားတဈယောကျနဲ့ ခဈြသူဖွဈခဲ့ပါတယျ..နောကျတော့ခဈြသူအမရေိကနျိနျငျငံသားက ဘနျကောကျကိုအလညျရောကျလာပါတယျ….
အတူသှားအတူအတူတူနပွေီးသိပျမကွာခငျမှာဘဲ ဗီဇာသကျတနျးကုနျတော့အမရေိကားကိုပွနျရတော့မှာမို့ ကောငျမလေးက မပွနျခငျသူမကို တရားရုံးမှာ ဇနီးမယားအဖွဈလကျမှတျထိုးသှားပါလို့ တောငျးဆိုတော့ ကောငျလေးက သူလကျမှတျ မထိုးပေးနိုငျပါဘူးတဲ့ ….
သူ့ မှာဇနီးရှိပါတယျ လို့ ပွောတော့ကောငျမလေးက နငျငါ့ကိုတရားရုံးမှာ လကျမှတျမထိုးပေးဘူးဆိုရငျ အခုခကျြခငျြးရဲ ကိုကွောငျးကွားပွီး ငါ့ကိုမတရားစျောကားပါတယျဆိုပွီး တိုငျမယျပွောတော့ အဲ့ ဒီနျိုငျငံခွားသားလဲ ကွောကျလို့ နှူတျပိတျတဲ့ အနနေဲ့ သတျပဈလိုကျပါတယျ..
သူ့ စိတျထဲမှာဘယျသူမှ မသိနိုငျမမွငျနိုငျဘူးလို့ ထငျပွီး အလောငျးကို တဈစစီ ခွေ လကျ တှေ အကုနျ အပိုငျးပိုငျးဖွဈအောငျဖွတျပွီး အမှိူကျထဲ့ တဲ့ ပလပျစတဈအိတျအမဲထဲထညျ့ပွီးမွဈထဲသှားမြှောပါတယျ ရကေကနြတောမို့ အလောငျးက
မမွောဘဲနဲ့ ဒီအတိုငျးကနျြနနေတောပေါ့ နောကျနေ့ အမှိုကျတှေ လိုကျကောကျတဲ့ သူကအလောငျးကိုတှေ့ တော့ ရဲကိုအကွောငျးကွားပွီးရဲကအမှူဈတော့ကောငျမလေးနခေဲ့တဲ့ တိုကျခနျးပိုငျရှငျကိုမေးတာ ကောငျမလေးဆီကို နိုငျငံခွားသားတဈယောကျအမွဲလာကွောငျး ….
သကျသအေနနေဲ့တိုကျခနျးရဲ့ လူသှားတဲ့ စင်ျကွနျတိုငျးမှာဗှီဒီယိုကငျမရာတပျထားတော့လူသတျရားခံကို လှယျလှယျနဲ့ ပဲ ပွနျဖမျးမိခဲ့ပါတယျ..
အဲ့ဒီနိုငျငံခွားသားဟာ အဲ့လိုမြိုးဆိုဒျတှမှော နိုငျငံပေါငျးစုံက အမြိုးသမီးတှနေဲ့ ရငျးနှီးအောငျမိတျဆှဖှေဲ့ ခဈြရေးဆိုပွီးအမြိုးသမီးတှကေိုဖကျြဆီးနတေဲ့ကမ်ဘာလှညျ့ကွာကူလီလူလိမျတဈယောကျပါ..
နောကျထပျသတငျး.တဈခုက အလယျတနျးကြောငျးသူလေးပါ…..ကြောငျးပိတျရကျမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ လလေ့ာရေးခရီး၃ ရကျလောကျသှားခငျြတယျဆိုပွီးမိဘတှဆေီမှာခှငျ့တောငျးပါတယျ ….
မိဘတှကေလညျးကြောငျးနဘေကျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ သှားမယျထငျပွီး ကွညျကွညျဖွူဖွူပဲ ခှငျ့ပေးလိုကျပါတယျ..နောကျ၃ ရကျလောကျကွာတော့ သမီးဖွဈတဲ့ သူအိမျကိုပွနျမရောကျသေးလို့ကြောငျးနဘေကျသူငယျခငျြးတှဆေီလိုကျမေးတာ
သူငယျခငျြးတှအေကုနျလုံးတဈယောကျမှ လလေ့ာရေးခရီးမသှားရပါဘူးတဲ့…ဒါဆိုရငျဘယျသူနဲ့ သှားတယျဆိုတာသိကွလားဘို့ မေးတော့ တိတိကကြတြော့မသိပါဘူး ….
Online ပျေါက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပဲ ဖွဈလိမျ့မယျတဲ့Online ပျေါကသူငယျခငျြးတှေ ဘယျမွို့ ဘယျရှာကလဲဆိုတာ မိဘတှရေော ငယျသူငယျခငျြးတှရေော တဈယောကျမှ မသိကွပါဘူး ။အဲဒါနဲ့ မိဘတှကေTV ကနတေဆငျ့ ဓါတျပုံနဲ့ တကှ လူပြောကျကွျောငွာ တငျပါတယျ..
သူတို့ ရဲ့ သမီးလေး Online ပျေါက ခငျတဲ့ သူငယျခငျြးနဲ့ လလေ့ာရေးခရီး၃ ရကျသှားတာ ယခုအခြိနျထိ အိမျပွနျမရောကျသေးကွောငျး..တှေ့ ရှိက အကွောငျးကွားပါရနျ ဆိုပွီး TV ကနလှေငျ့ပေးပါတယျ ဒါပမေယျ့ ယခုအခြိနျထိ ကောငျမလေး အိမျပွနျမရောကျခဲ့ပါဘူး သလေားရှငျလားတောငျမသိခဲ့ရပါဘူး.
ကဲ သူငယျခငျြးတို့ ရေ..ဒီအဖွဈအပကျြလေး၂ ခု ကိုကွညျ့ပွီးတို့ တှေ သုံးသပျရအောငျနျော..Online ပျေါမှာက လူပေါငျးစုံ မို့လူ ကောငျးလားလူလိမျလားဆိုတာမသိနိုငျပါဘူး ။
လူကောငျးတှရှေိသလို ရုပျလေးဗနျးပွပွီး မဟုတျတာ လုပျနတေဲ့လူလိမျတှလေဲ ရှိပါတယျ…တဈခြို့ က ခမျြးခမျြးကို ဝဖေနျအပွဈတငျကွပါတယျ.အှနျလိုငျးပျေါက လူတှကေို မယုံကွညျတာဟာ သဘောထား သေးသိမျတာပဲတဲ့..
သခြောစဉျးစားကွညျ့ရငျ..မိနျးကလေးနဲ့ ယောကငြ်ျားလေးယှဉျလို့ မရဘူး..မိနျးကလေးဆိုတာ အစစအရာရာ သတိထားပွီးဆငျခွငျပါမှာ တျောရာကပြါလိမျ့မယျ..
တဈကယျလို့ ခမျြးခမျြးကို အှနျလိုငျးပျေါက သူငယျခငျြးတှအေယုံအကွညျမရှိဘူး လို့ ပွောလာရငျ လဲ စိတျမဆိုးဘူး.
အငျး ငါ့အကွောငျး သူမသိသေးလို့ငါ့ကိုအယုံအကွညျမရှိတာပဲ..သူမမှားပါဘူး.တဈနေ့ ငါ့အကွောငျးသိရငျတော့ ငါ့ကိုနားလညျပါလိမျ့မယျဆိုပွီး ဒီလိုပဲ ခံယူထားတယျ…
အကွောငျးမသိတဲ့ လူတဈယောကျကို လှယျလှယျ လေးယုံကွညျ့လိုကျတာထကျသခြောလလေ့ာပွီးမှ ယုံကွညျသငျ့ပါတယျ..ခမျြးခမျြး စာအုပျတဈအုပျမှာဖတျခဲ့ဘူးပါတယျ…။
မိနျးကလေးတဈယောကျဟာမိမိရဲ့ တနျဖိုးဘဝသိက်ခာနဲ့ ပကျသကျလာရငျအားမနာတတျတာအကောငျးဆုံးပါ တဲ့ .အရာရာကို အသိလေးနဲ့ စဉျးစာဆငျခွငျပွီးခငျြ့ယုံပါလို့ ဆန်ဒပွုလြှကျ…..
Posted in ဗဟုသုတTagged သူငယ်ချင်း
Previous post သနားလိုက်တာ “ကြံရည်စက်ထဲ လက်ညှပ်မှု ဖြစ်ပွား”
Next post လေဖြတ် လူနာများသို့ ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ ဆေးနည်း လေးပါ ။ လုံးဝ ပြန်ကောင်း ပါ တယ်